5 Nhamba dzekuwedzera Mabhutiro eBealt kubva kuSemalt
Kugadzira zvinyorwa zvinotarisa utachiona ndezvokutanga kune vose vakatanga blog. Saizvozvo,zvinoda kufungidzira-kuita zviito zvakasimba, izvo zvinogara zvichibatana. Kubva pakusika chimirozvakagadzikana kukudziridza zvakanaka social media strategy, danho rimwe nerimwe rinokosha. Ivan Konovalov,Mutengi weKitendi Mutungamiri we Semalt Digital Services inopa mazano anobatsira ekuwedzera kweblog traffic.
1. Ita Viral Content
Nyora zvinyorwa zvinonakidza, zvinofadza zvinokwezva vateereri. Musoro wehurukuro yakondicho chinhu chinonyanya kukosha paunonyora zvinowanikwa nehutachiona. Uyai nemazita akanaka anozoitatora pfungwa dzevashanyi paIndaneti. Kana zita rako richikufadza, iwe unowedzerazvichida kuwana huwandu hits panzvimbo yako. Kunze kwekusika mazita akanaka, nyora zvinyorwa zvenguva refu.Pinda mumashoko ehurukuro yako uye tsanangura pfungwa dzako nenzira inonakidza. Anotsanangurwachinyorwa chichanyengera vatenzi vako veku blog kuti vaverenge iyo nyaya yose. Isa mifananidzo yakajeka mukati makochinyorwa kuitira kubatsira vadzidzisi kunzwisisa nyaya yako zvakajeka. Nokudaro, vaverengi vako vachashanyira blog yako zvakare kuti uverenge nyaya yako inotevera.
2. Shandisai Nyaya Yenyu Kuwedzera Pane Yakambove
Kana iwe uchida kuwedzera chikwata ku blog yako, unofanira kutsvaga kune vamwe vashanyi. Vamwe vaverengi vanogona kuwanainternet paawa masikati uye vamwe panguva yeusiku. Wedzera magwara ku blog yako nekugovananyaya yako kakawanda panguva yezuva kana mwedzi. Iko huru yezvemagariro epepanhau zvingabatsiraiwe kuti uite izvi ndizvo Facebook, Twitter, Pinterest, uye Google+. Uyai maboka uye munharaundaizvo zvakabatana nemashandiro enyu uye mugogovera zvokudya zvenyu..
3. Isa Nyaya Yakarurama
Kune zviuru zvemashesi mumusika. Zvisinei, vazhinji vavo havasi kuzowirirana nemwiblog. Izvi zvinoreva kuti unofanirwa kusarudza nokuchenjera uye kuisa yakarurama. Nyaya yakanaka inofanira kunge yakazaraanoteerera, izvo zvichaita kuti bhaibheri rako riwanike pane zvigadzirwa zvakasiyana siyana kusanganisira desktopsuye mafoni anotarisa. Iwe unofanirwawo kusarudza chinyamupinyi chekukandira. Kana hurukuro yako ichikwira zvakasimba,zvinoita kuti vashanyi vakanamire pasi pebhurogi yako uye verenga zvimwe zvinyorwa. Mukuwedzera, sarudza musoro unowanikwarakanaka uye rakakosha kugadzirwa.
4. Wedzera Share Button
Bhokisi rekugovana rinokubatsira kuti uwedzere simba rezvigadzirwa zvemasangano ekufambisa vanhu vakawanda.Vaverengi vanogara vachida kugovera nzvimbo inofadza. Nokudaro, wedzera bhatani rekugovera kune chinyorwakuitira kuti zvinyorwa zvako zvive zveviral. Izvi zvinoreva kuti vaverengi vako vachakwanisa kugovera mabhurogi ako nemapatoshamwari neshamwari. Sezvo mugumisiro wekugovana uku, bhulogi yako ichawana mamwe magwara.
5. Mhinduro mumamwe mabhuku
Mazwi ave chinhu chakasimba, chinokubatsira pakuwana backlinks uye kufamba. CherechedzamaBloggs anozivikanwa uye maonero pamisoro yavo uye maforamu. Mashoko ane chinangwa achakwezva,uye zvichida, uchawana mhinduro dzinokupa backlinks. Mhinduro dzichakusimbisa iwe senyanzvi uye kukubatsira iwe kuti ukweve zvakawanda zvekutakura kuenda ku blog yako.
Semalt nyanzvi Ivan Konovalov anoratidza kuti kushandiswa kusingaperi kwezvataurwa pamusoro apa zvinotungamirirakuti kuwedzere bhagi rako rekufamba. Muitiro wakadaro wakagamuchirwa kubudirira nevatengi vedu nekusimbiswakubudirira kwayo. Kubva zvino zvichienda mberi, unogona kushandisa mazano aya pamwe nemasangano eunyanzvi Semalt kutora bhulogi yako kune imwe inotevera Source .